စာစုတို | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 30
လင်းထင် – ဂျူံခင်းထက်က ကျီးကန်းတွေ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၇၊ ၂၀၁၅ ဘ၀အပေါ် နှစ်သက်ခုံမင်တယ်၊ ရှင်ရမှုကို စွဲလမ်းနှစ်လိုစိတ်ဟာ အရှိန်တညီးညီး တောက်လောင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာဉာဏ် နဲ့တော့ မယှဉ်ဘူး။ ဘ၀တဏှာလို့ ခေါ်မှာပေါ့၊ Lust for life ပေါ့….။ အဲဒီ့ နာမည်နဲ့ ဗန်ဂိုးအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရှိတယ်။ ကတ်ဒေါက်ကလပ်စ်က ဗန်ဂိုး၊ အန်ထနီကွင်းက ဂေါ်ဂင်။ ဗန်ဂိုးဟာ မိုင်းတွင်းက ဘာသာရေးဆရာ၊ လူမှုပြုပြင်ရေးသမား၊ ဘ၀မှာ မအောင်မြင်ဘူး။ ကယောင်ချောက်ချားနဲ့ ပန်းချီဆွဲ တော့လည်း မအောင်မြင်ဘူး။ မအောင်မြင်သမျှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာလည်း မအောင်မြင်၊ ရင်ဘတ်မှာ သေနတ် ဒဏ်ရာနဲ့ ၂ ရက် အသက်ဆက်ရှင်တယ်။ သေခြင်းဟာ သူနောက်ဆုံးနေသွားတဲ့...
ေ ဆာင်းလူ – စ္ဖား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၅ မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ ခုတလောက ဟိုလူလည်း မျက်နှာချိုသွေးရ .. ဒီလူ့လည်း သွားဖြဲပြရနဲ့ ကြာတော့ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် ဖားလုံး လုံးကိုဖြစ်လို့ …။အသွားမတော်တလှမ်းဆိုတာပဲရှိမယ် .. ။ အဖားမတော်လို့ကတော့ဖြင့် သူမနာ ကိုယ်မနာဆိုတော့ လောကကြီးဟာ အေးဆေးပေါ့ ..။ ကံကောင်းလို့ အဖားတော်ရင် တက်လမ်းဆိုတာလေးရှိတော့ ဖားတယ် ယားတယ်ဆိုတာ တွက်ခြေကိုက်တဲ့ အလုပ်ဗျ။ မယုံမရှိနဲ့ …။ ဖားရ ယားရတယ်ဆိုတာလည်း လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ ..။ အကိုတန်သည် အကို၊ ညီတန်သည် ညီ၊ အမတန်သည် အမ ညီမတန်သည်...
ဆောင်းလူ – ၀တ္လ်စ္စလစ် အိပ်မက်
ဆောင်းလူ – ၀တ္လ်စ္စလစ် အိပ်မက် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၅ ကျုပ်တို့ဘ၀ကလည်းဗျာ သိပ်တော့ မနိပ်လှပါဘူး။ ဒီအသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်နေကျတဲ့သူတွေကြောင့် ဘ၀ဟာ တခါ တခါ ၀တ္လ်စ္စလစ်နဲ့ ဟန်လုံးထုတ်ထုတ်ပြရတာ သိပ်တော့ မနိပ်လှဘူးဗျ။ စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ …။ တခါ တခါဆို ခေါင်းမပါဘူး … တခါ တခါဆို ခြေထောက်မပါဘူး … တခါ တခါဆို လက်မပါဘူး … အင်္ဂါမစုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထုတ်ထုတ်ပြရတာလည်း ရှက်လှပါပြီဗျာ …။ နိစ္စဓူဝနဲ့ သူတို့ဘ၀တွေ ပိန်တာ ဖောင်းတာ ကျုပ်လည်း သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာ …။ ဒါပမေယ့် ကျုပ်တို့ ပိန်တာ ဖောင်းတာကျ သိပ်မဟန်လှဘူးဗျ။ အဓိပ္ပါယ်ပါ ပျောက်ကုန်တာလေဗျာ။ တခါတလေ...
ဖိုးထက် – My skin စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း
ဖိုးထက် – My skin စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၅ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် အလုပ် လုပ်စဉ်က သူဌေး၏အခန်းမှာ သူ့ဘီယာသောက်ပြီး သူ့ကို စသလိုလို နောက် သလိုလိုဖြင့် ဝေဖန်အရေး ဆိုတော့ My skin so thick. လို့ ပြောဖူးတာ တခါတရံ ကျွန်တော် သတိရတတ်သည်။ ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်သော သူများ၊ သံယောဇဉ်ရှိသော သူများ၊ ပြောမနာ ဆိုမနာများက အထိမခံ ရွှေပန်းကန်ကြီး၊ ဆတ် ဆတ်ထိမခံကြီး၊ အရေပြားပါးလွန်းသူကြီးလို့ မကြာခဏ ဝေဖန်ကြသည်။ သူတို့ မှန်လဲ မှန်သလို၊ မှားလဲ မှားပါသည်။ သူတို့ကို ကျွန်တော်က ရင်ဘတ်ကြီးဖြင့် ခံစား၊ စိတ်ရော...
ဖိုးထက် – ဘာတွေ ချန်၊ ယူ သွားချင်သလဲ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၅ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဘယ်သင်းကို ပိုပြီး ဓာတ်ကျသလဲလို့ အမေးရှိရင် စာအုပ်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို လုံးဝမကြည့်ဘဲ နေနိုင်ပြန်တာတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အထူး သဖြင့် ကိုယ် ဖတ်ဘူးတဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ်တွေကို ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းအဖြစ် ပြောင်းထားတာမျိုး။ ကိုယ်သိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ အထ္တုပ္ပတ္တိကို ရုပ်ရှင် အဖြစ် ဖန်တီးထားတာမျိုးဆိုရင် သေသေချာချာကို ကျွန်တော် ကြည့်ပါတယ်။ မျှော်တလင့်လင့် ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ၀ထ္တုစာအုပ်ကြီးကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်ကြည့်တော့ ဆားမပါတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက် စားရသလို။ ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။ လေရူးသုန်သုန်ကို ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်တော့...
မောင်မောင်စိုး – အရက် ဘိန်း နှင့် စောင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၅ • အရက် အရက်ကို ဘယ်လိုသောက်ရတယ်ဆိုတာ ကျနော်ကိုပြသွားသူကတော့ ကျနော့်ယောက္ခထီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ယောက္ခ ထီးက ကချင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အင်ဗွေတူးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့ အစွန်အဖျားကျတဲ့တောင်ပေါ်ကချင်ရွာလေးတရွာမှာ နေထိုင်သူပါ။ လှေခါးထစ်လယ် တောင်ယာ အလုပ်တို့အပြင် ရံဖန်ရံခါ အမဲ လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ တောင်ကျချောင်းထဲမှာ ငါးရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စားဘို့ကို အဲဂလိုဖြေရှင်းသလို ဝါးရုံတွေ သက်ငယ်ခင်းတွေ စိုက်ပျိုးထားလို့နေဘို့လဲ ပူစရာမလိုပါ။ ဝတ်ဘို့တခုဘဲ ငါးရက်တဈေးကဝယ်ရပါတယ်။ ဒါတောင် ယောက္ခမ ဂျပ်ခုတ်တဲ့ အထည်တွေ ရှိသေးလို့ ဆိုရပါမယ်။ ပြောချင်တာကတော့ကျနော့် ယောက္ခထီးမိသားစုဟာ ဘဝကို ရိုးစင်းစွာဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ တောင်တန်းပေါ်က ကချင်မိသားစုလေးပါ။...
စံလှကြီး – လူရော နာမည်ပါ သေဆုံးကြသည့် အီကြာကွေးနှင့်တူသူများ
စံလှကြီး – လူရော နာမည်ပါ သေဆုံးကြသည့် အီကြာကွေးနှင့်တူသူများ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၅ ကျနော်ငယ်စဉ် မူလတန်းကျောင်းသားဘဝတွင် အိမ်က မုန့်ဖိုးပေးလေ့မရှိပေ။ မုန့်ဖိုးပေးလိုက်လျှင် ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ယင်နားစာတွေ မတည့်တာတွေဝယ်စားမှာ အစိုးရိမ်ကြီးကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ကျောင်းသွားပြီဆိုလျှင် အိမ်က စားစရာတခုခုစီစဉ်ပြီး ထည့်ပေးတတ်သည်။ တခါတလေလည်း မာလကာသီးကို ဓားနဲ့ပါးပါးလှီးပြီး သကြားဖြူးထား တာမျိုး တခါတရံ ထမင်းဗူးလေးတွင် ထမင်းနှင့်ဟင်း (သို့မဟုတ်) အီကြာကွေး စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကလည်း ကလေး ဘဝဆိုတော့ သိပ်တော့အများကြီး မစားနိုင်ပါ။ အများဆုံးထည့်ပေးတတ်သည်က အီကြာကွေးဖြစ်သည်။ လူကြီးတွေ ဝယ်ရ တာလွယ်သလို ကိုယ်ကလည်း မမုန်းတမ်း စားလေ့ရှိသည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ နံပြားတချပ် ဆယ်ပြားလား ပြားနှစ်ဆယ် လားပဲ ပေးရသည်။...
ဖိုးထက် – U23 ချန်ပီယံ ညီငယ်များသို့ …
ဖိုးထက် – U23 ချန်ပီယံ ညီငယ်များသို့ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၅ ၂၈ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲမှ အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အကြိုဗိုလ်လုပွဲကို ကွင်းထဲသို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနှင့် ဗီယက်နမ်။ အားမနာတမ်းသာ ဝေဖန် လေကန်ရလျှင် ဗီယက်ကောင်းများက ရွှေမြန်မာ သာကီမျိုးတွေထက် ပိုကောင်းသည်။ ကစားကွက် သာသည်။ တဦးချင်း သာသည်။ သို့သော် ဘောလုံးဆိုတာ ကံသေကံမ ဘယ်လိုမှပြောလို့ရသော အရာမဟုတ်သလို ပွဲပြီးတော့ မြန်မာနိုင်သည်။ စိတ်ဓာတ်အင်အား။ အသင်းလိုက် ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ မခိုမကပ် ရေကုန်ထုတ် ရှင်းသန့်စွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုများကို ကံတရား ဖေးမမှုပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်တာလို့ ကျွန် တော် ဆိုချင်သည်။ ကံသည်...
ဖိုးထက် – မဘသ ဘောပွဲ
ဖိုးထက် – မဘသ ဘောပွဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၀၆၊ ၂၀၁၅ ခေတ်ဟောင်းကဆိုခဲ့ကြပြီး အခုခေတ်အထိ ခေတ်မှီနေဆဲ သီချင်း တပုဒ်ရှိသည်။ သီချင်းက အမျိုးသမီးသီချင်း။ … “သိကြားမင်းတောင် ဖျက်တာ မပျက်နိုင်ပါဘူးရှင်။ ပျို့စိတ်ထဲမှာ မောင့်ကိုသာ ချစ်ခင်။ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မေတ္တာမညှိုးပေါင်၊ တိုး၍ မောင်ကဲချင်။ ဖဲရိုက်တာ မြင်းလောင်းတာတွေ စုံလင်။ ဒါထက်တောင် ကဲအုံးရှင် ဆယ်ဆပင်။ မေတ္တာ သို့ပေမယ့် ပျက်ပေါင်ရှင်။ မောင့်ကိုသာပင် စိတ်ထဲက အသဲရော အူရောခင်၊ ကလီဇာရောခင်၊ ချစ်တာ အမှန်ပင် ရွှေမေတ္တာ အရင်းခံပါဘဲရှင်….ည အိပ်ရာထဲဝင် ဘုရှားရှစ်ခိုးရင် မောင့်ကို ရည်မှန်းကာ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေရှင်” …တဲ့။ ဖဲရိုက်၊ မြင်းလောင်းတာလောက်နှင့်တော့ အမျိုးသမီးများက...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – မှန်ရော မှန်ပါရဲ့လား
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – မှန်ရော မှန်ပါရဲ့လား (မိုးမခ) ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၅ (၁) ဆေးရုံတရုံရှိ သားဖွားခန်း အပြင်ဖက်တွင် သားမက်ဖြစ်သူနှင့် ယောက္ခမဖြစ်သူတို့ ထိုင်စောင့်နေကြသည်။ သမီးက မွေးခန်းထဲမှာ။ မွေးလူနာရဲ့အမေဖြစ်သူမှာ ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုလျက်။ တနာရီလောက်ကြာတော့ သူုနာပြုဆရာမတယောက်က လာခေါ်၍လိုက်သွားကြသည်။ မွေးခါစ ကလေးကို ကလေးဆရာဝန်မကြီးက ပွေ့ထားရာမှ ပြပြီး တဆက်တည်း ပြောသည်။ “ကလေးက ၆ ပေါင် ၁၅ အောင်စ ရှိတယ်” ကလေးအဖေ အသစ်စက်စက်က ကလေးကိုကြည့်ပြီး စဉ်းစားသည်။ ၆ ပေါင် ၁၅ အောင်စ တဲ့။ တိုင်းတဲ့ ပေါင်ချိန်စက် မှန်မယ်ထင်တာပဲ။ ကလေးပွေ့ကာ မွေးခန်းထဲသို့ ဆရာဝန်မကြီး ပြန်ဝင်သွားသည်။ ကလေးအဖေက တယောက်တည်း...
Page 30 of 36«1...2829303132...36»